Meelaha isafgarad iyo Qari Menubariga: Qari baarka menu ee Thunderbird | Laga soo bilaabo Linux
Menu Compact iyo Qari Menubar: Qari baararka menu-ka ee Thunderbird
Marka lagu daro sida ay awood u yeelan karaan, labadaba Firefox sida Thunderbird waxay leeyihiin wax had iyo jeer ka dhiga inay ka soo baxaan inta kale: Kordhinta.
Xaaladdan oo kale waxaan ku tusayaa laba kordhin oo aad ii anfacaya (gooni gooni ah) tan iyo markii ay iga caawiyaan inaan helo meel toosan oo shaashadda ah aniga Macmiilka Boostada. Ujeeddada labadaba waa in meesha laga saaro ama laga qariyo baararka meeshiisa, maaddaama ugu yaraan aanan weligey isticmaalin oo ay qaadaneyso boos aan loo baahnayn
1 Liiska isafgaradka
2 Qari Menubar
Waan jeclahay kordhintan, gaar ahaan maadaama la qaabeyn karo. Waxa ay qabato ayaa lagu dhejiyaa barta miiska badhanka midaysan, qaabka Firefox. Intaa waxaa dheer, waad beddeli kartaa astaanta oo aad dejin kartaa dookhyo kale. Fiiri sawirka soo socda, sida aan menu ugu dhigay astaanta Thunderbird midigta sare:
Muddo dheer ayaan la isticmaalay Firefox iyo waxa ay qabato waa, qari bar menu, oo aan ka heli kartaa adigoo riixaya furaha [Alt]. Si kasta oo ay tahay, labada kordhinba si adag ayey u gutaan shaqadooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Menu Compact iyo Qari Menubar: Qari baararka menu-ka ee Thunderbird
Muuuuuuuuuuuuuuuuuuu aad baad u mahadsan tahay ... hadda waan rakibay Liiska isafgaradka waxayna ka shaqeysaa timo….
Wanaagsan, maadaama firefox la soo baxay ikhtiyaar ah in lagu qariyo bar menu, waxaan doonayay isla ikhtiyaarkan oo onkod ah iyo cusboonaysiin kasta ka dib waxaan doonayay in lagu daro, laakiin waligeed sidaas ma ahayn ... ilaa maanta 😀
Waxaan isticmaalaayay isugeynta menu muddo dhowr bilood ah hadda oo wey shaqeysaa. Waxaan ula jeedaa, ugu yaraan waxay haysaa dhammaan xulashooyinkaas aanan u isticmaalin aragga, haha.
Waxaan u isticmaalaa Hide Menubar ficil ahaan tan iyo markii aan bilaabay isticmaalka Thunderbird, waa waxyaabo ay tahay inaad raadsato marka pixel kasta oo ku yaal meel taagan uu u qalmo dahab, in shaashadda 10 of ee netbook aysan siinayn wax badan oo xD ah
Aad ayaan u xumahay waxaan dib ugu noqday Evolution aniga oo jooga Debian @@…
waad ku mahadsan tahay fikradda! anigoo raadinaya sida loogu ballaariyo aagga la isticmaali karo ee ku yaal netbook, waxaan helay qoraalkaaga. Laakiin anigoo haysta 13 (Juun 2012) Waxaan u arkaa taas anigoo si fudud u riixaya barta menu-ka, oo aan iska hubinayo Menu, baarka menu-ka ayaa baaba'aya, oo muuqda markasta oo aan riixo furaha ALT ... Adigoon rakibin kordhinta HideMenu.
marka waad ku mahadsan tahay talooyinka!